Ireo zava-bitan’ny « Cellule 3P »
auteur octobra 14, 2014 Commentaires fermés
Mba ahafahantsika mahatsapa izany asa fanampiana notanterahina teto amin’ny lapan’ny tanana eto Antananarivo izany dia ireto avy ny sehatra mazava niasana : - Fanamboarana efitrano fianarana - Fanarenana lalan-kelim-pokontany - Fanadiovana tanàna - Asa
Fandaminana ny tsena COUM 67 HA
auteur octobra 10, 2014 Commentaires fermés
Araka ny fandaminana ny tsena eo amin’ny COUM 67ha, dia nisy ireo fampilazana mialoha an’ireo mpivarotra rehetra, tao anatin’ny herinandro mahery ny amin’ny fanakisahana ny entam-barotra sy hanatanterahana ny toro-marika nomen’ny tompon’andraikitra. Nanomboka ny
KRôSY NO TOBACCO
auteur octobra 9, 2014 Commentaires fermés
ANARAN’NY HETSIKA : KRôSY NO TOBACCO TANJONA : Fanentanana mba hiadiana amin’ny fidorohana zavamahadomelina, Alkaola ary Tabac hoan’ny mponina eto andrenivohitra. Daty : 11 octobra 2014 Ora : 07H30 FIZOTRANY Miainga eo anoloan’ny Lapan’ny
Hira gasy « Final »
administrateur octobra 7, 2014 Commentaires fermés
Tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo no natao teto amin’ny Lapan’ny Tanàna ny famaranana ny hira gasy makotrokotroka izay nifanandrinan’ny tarika Razafimahandry avy eny Sahavato sy Rafarahasimanga Georgine avy any Ambohimandroso. Mitentina 1 000 000Ar
Atrik’asa « Securité Humaine »
auteur octobra 1, 2014 Commentaires fermés
Ho fampihenana ny faharefoana sy ny herisetra nisy teto Antananarivo, dia nijoro nandritra ny telo taona ny projet « Sécurité humaine » izay niarahan’ny Kaominina Antananarivo sy ny fikambanam-be Iraisam-pirenena. Fokontany 25 no nahazo
Haify Mampiavana 2014
auteur septambra 26, 2014 Commentaires fermés
Notanterahina tetsy amin’ny jaridainan’Andohalo tamin’ny faran’ny herin’andro teo ny hetsika « HAIFY MAMPIHAVANA ». Nahitana mpandray anjara maro tamin’izany toy ny avy eto Antananarivo sy avy amin’ny faritra. Hita teny avokoa ireo karazan- tsakafo
Mitohy ny fandaminana ny Tsena Petite Vitesse
Efa nisy ny fampilazana mialoha ireo mpivarotra amoron-dalana amin’ny fanentanana azy ireo hiditra an-tsena efa ho andro maromaro izay . Niroso nanomboka tamin’ny fandaminana amin’izay nanomboka ny alakamisy 18 septambra lasa teo ka nitohy
Fadaminana ny tsena « Petite vitesse »
auteur septambra 18, 2014 Commentaires fermés
Ny Tanànan’Antananarivo dia miezaka andro aman’alina mandamina ny tsena Kaominaly, indrindra ny fitarihana ireo mpivarotra hiditra an-tsena. Efa miroso amin’ izany indrindra ny tsena ny « petite vitesse ». Nanomboka tamin’ny volana septambra teo
Antsalovana : Tafo miisa 96 no nirehitra
Ny alin’ny 16 Septembre 2014 tokony ho tamin’ny 11 ora sasany dia nitrangàna hai-trano mahatsiravina tetsy amin’ny faritra Antsalovana Ankazomanga. Tokantrano 96 indray no traboina izany hoe olona miisa 454. Araka ny fitantaran’ny mponina
Présentation du 14ème édition du MARATHON INTERNATIONAL de TANA
auteur septambra 16, 2014 Commentaires fermés
Vima et la Fédération Malagasy d’Athlétisme sont heureux de vous annoncer La 14ème édition du MARATHON INTERNATIONAL de TANA 1. Présentation Vima ou Vision Madagascar, est un groupe leader dans le secteur de l’immobilier,